China 15Khz 2600w Amandla aphezulu e-Ultrasonic Welding Oscillator nge-Steel Booster Ukwenziwa kunye neFektri | Qianrong
I-15Khz 2600w yamandla aphakamileyo ye-Ultrasonic Welding Oscillator ene-Steel Booster
Rhoqo I-15 khz
Imveliso yamandla I-2600 watt
I-bolt edibeneyo M16 * 1
Yodongwe disc Ububanzi 60mm
Yangaphakathi yidiski yodongwe 4pcs
Ukusetyenziswa Umatshini Welding zeplastiki
I-ultrasonic Oscillator ikwabizwa ngokuba yi-ultrasonic vibrator. Umzi mveliso uphela uqhagamshelwe kuphondo kwaye uphondo lubizwa ngokuba sisidlidlizi. I-vibrator ye-ultrasonic sisixhobo esiguqula amandla ombane kunye namandla oomatshini (ukungcangcazela kwe-acoustic) ngesiphumo se-piezoelectric yeeseramiki ze-piezoelectric, kwaye ikhulisa iibhloko zekhuselo elingaphambili nangasemva ngemitha ehambelana ne-acoustic impedance.
I-vibrator ye-ultrasonic yenziwe nge-ultrasonic transducer kunye nophondo lwe-ultrasonic. I-ultrasonic transducer sisixhobo esinokuthi siguqule amandla ombane ohamba ngesantya esiphezulu kumandla oomatshini. Uphondo lwe-Ultrasonic sisixhobo esenziwe ngaphandle kokuvelisa ukungcangcazela. Itshintsha kuphela ukuphakama kwegalelo lokungcangcazela kwi-transducer ye-ultrasonic kwaye emva koko idlulise. Utshintsho lwempazamo.
Ungayikhetha njani i-ultrasonic welding machine kunye ne-20khz kunye ne-15khz frequency?
Eyona ndlela ixhaphakileyo yoomatshini be-welding ye-ultrasonic yi-15khz kunye ne-20khz ye-ultrasonic welding matshini. Ukuphakama kwesantya se-ultrasonic, kokukhona kulunge ngakumbi ukuchaneka kwe-welding, kodwa kuncinci amandla esihlobo, kuncinci ukuphakama. Oku kulandelayo kuchaza umahluko phakathi komatshini wokudibanisa i-ultrasonic 15khz kunye no-20khz:
Xa isantya se-ultrasonic siphantsi, ingxolo iveliswa. Xa amaza asezantsi engaphantsi kwama-20 khz, ingxolo iba nkulu kakhulu nge-welding ye-ultrasonic. Kwiimveliso zeplastikhi ngokuchaneka okuphezulu kwe-welding, kokukhona iphindaphindwayo, kokukhona kungcono. Ke ngoko, umatshini we-ultrasonic welding we-20khz okanye ngaphezulu ulungele ukuchaneka, ii-ultra-thin, iinxalenye zeplastikhi ezibuthathaka kakhulu, ezinjengekhadi le-SD, okanye iimveliso ezinekristal ngaphakathi kwimveliso; Umatshini we-15khz we-ultrasonic welding kulula ukukhulisa kwaye une-amplitude enkulu. Kufanelekile ukuwelda ubukhulu obukhulu, kunzima uku-weld, iimveliso zeplastiki ezinzima;
Okwesibini, i-15khz kunye ne-20khz ubungakanani besikhunta se-ultrasonic nako akuhambelani. Ukuphakama kwesikhunta se-15khz ye-ultrasonic ngokubanzi malunga ne-17cm ubude, ngelixa i-20khz mold mold i malunga ne-12.5cm ubude.
Kwakhona, umatshini we-15khz we-ultrasonic welding unokuwelda imisebenzi emikhulu, kwaye amandla anokwahlulwa abe yi-2600w / 3200w / 4200w. Umatshini we-20khz we-ultrasonic welding umatshini yi-900W-2000w, amandla amancinci, kwaye ubungakanani bemveliso ye-welding incinci.
Egqithileyo Okuphambili kwe-20Khz 3300w ye-Ultrasonic Welding Replacement CJ20 Transducer ene-Metal Steel Outer Cover
Okulandelayo: I-20Khz 1500w ye-Ultrasonic Welding Transducer ngeNkqubo yokuShukumiseka kweNtsimbi yokuNyusa